Mgbanwe: Meziwanye Mmetụta nke Mgbasa Mgbasa Ozi Gị | Martech Zone
Mgbaghara: Meziwanye Mmetụta nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi gị
Thursday, July 12, 2012 Sunday, October 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Ka oge na-aga, ndị ahịa azụlitewo usoro pụrụ iche na nke ọhụụ iji mepụta ndu. Mana mgbasa ozi n'ịntanetị ka na-ejigide ọkwá kachasị n'ọma ahịa. Ihe ọmụmụ Appssavvy, "Ndepụta mmekọrịta ọha na eze - astụle ịdị irè nke mgbasa ozi ọha na eze" nke emere na Eprel 2011, na-ekpughe na mgbasa ozi ejikọtara na mmemme mmekọrịta mmadụ na-agbasa na egwuregwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ngwa ya, yana weebụsaịtị dị okpukpu iri na otu karịa nyocha a na-akwụ ụgwọ, na ugboro abụọ. dị ka mgbasa ozi bara ọgaranya.
Omenala mgbasa ozi Internetntanetị, na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ebe ọzọ, bụ igbe ma ọ bụ ọkọlọtọ mgbasa ozi. Mgbe ị dị irè na mbido, mgbasa ozi dị otú ahụ na-emepụta CPM dị ala ugbu a wee belata na arụmọrụ karịa afọ. Nnyocha 2010 Harris Interactive gosipụtara na pasent 43 nke ndị ọrụ ịntanetị na-eleghara mgbasa ozi ọkọlọtọ. Nke a bụ obere n'ihi eziokwu ahụ bụ na ndị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ nwere obere oge (na nlebara anya!) Iji nyefee na mgbasa ozi, nke ha na-ewere dị ka ihe ndọpụ uche.
Uchechi na-agba mbọ iji hụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na-eweta ROI dị mma yana ụzọ ọhụrụ maka mgbasa ozi n'ịntanetị.
Mgbasa ozi nke Appssavvy bụ ihe ngosiputa teknụzụ mgbasa ozi na - arụ ọrụ nke na - enye ndị na - ere ahịa ohere ịmeghe ohere ọhụụ ọhụụ karịa ịzụrụ ohere na ngwa ahịa dị.
Ihe mgbasa ozi Advocation na-eme ka ndị ọrụ nọrọ n’iru na-anabata mgbasa ozi ya. Ọ na-agbaso omume onye ọrụ ma nyefee mgbasa ozi mgbe onye ọrụ were ezumike n'etiti ọrụ. Ọ na-ahụkwa na ad jikọtara na ahụmịhe zuru oke. N'aka ozo, o na egosi mgbasa ozi di nkpa, na eme ka odoro anya na mgbasa ozi metutara ihe onye oru a kacha amasị ya, ma gbalie ikwusi onye oru.
Onye na-ere ahịa na-enweta nghọta banyere arụmọrụ nke mgbasa ozi site na usoro mgbasa ozi, nchịkọta na nyocha nke enyere site na Adtivity.
Maka ama ndị ọzọ, ịnye ọnụahịa, ma ọ bụ ịmalite iji mgbasa ozi na-ebipụta mgbasa ozi, biko gaa na: http://appssavvy.com/#contact.
Tags: MmekọahụAppSavvyCampaignsmetricsomume njirimara
Ihe kpatara ndị na-ere ahịa ji abanye Infographics
Mee ka ihu akwukwo Facebook gi na North Social
Jul 14, 2012 na 3: 03 AM
Yup. Ihe na-agbanwe na SM na ọ dị mma na ị jikwaa iji nweta ndụmọdụ ga-enyere gị aka ịgbanwe mgbanwe na mmụba nke SMA.